ANGOVO: TSY HISY FIAKARAN’NY VIDIN’NY SOLIKA AMIN’ITY VOLANA ITY
On avr 3, 2019 5 779
Tontosa ny Talata 02 April teo teny amin’ny Minisiteran’ny angovo sy ny ankoranafo ny fivoriana , nentina nandihina ny famerana ny vidin’ny solika eto Madagasikara. Niatrika izany teny an-toerana ny teo anivon’ny mpaninjara ny solika , ny fiarahamonim-pirenena , izay notarihan’ny eo anivon’ny minisitera mpiahy. Efa am-bolana maro no nifampidinihana ny momba ny famerena ny vidin’ny solika, ny momba fandaminana tokony atao amin’izay. Samy naneho ny soson-kevitra avokoa ny mpandray anjara.
Teboka maro no anisan’ny nodinihana teo amin’ny mpiara miombon’antoka , anisan’izany ny momba fijerena manokana ny tokony hampidinina ny vodin’ny solika, ny fanampiana manokana ny mpandraharaha ny fitaterana mba tsy hisianny fiakaran’ny saran-dalana.
Nitatitra anefa ny eo anivon’ny Minisitera, fa tsy nisy marimaritra iraisana saingy tapaka fa ny fanjakana amin’ny alalan’ny vaomiera mannkana ahitana solotena isakin’ny minisitera no handinika izay famerana ny vidin’ny solika eto amintsika izay.
Nilaza ny teknisiana sy ny Minisitry Vonjy Andriamanga ,fa efa nanome soso-kevitra, afaka mifanaraka tsara amin’izay mahamety ny tsirairay ny minisitera saingy tsy nanaiky ny sasany tamin’ny mpandraharaha momba ny solika. Vokany, miverina amin’ny fanjakana ny fanapahan-kevitra.
Tapaka araka izany fa ilay komity manokana,hapetraka no handinika ny rafitra amin’ny famerana ny vidin’ny solika. Ny volana jona izao, hihatra ny vidin’ny solika noferana. Mialoha izay, nanamafy ny Minisitry ny angovo sy ankoranafo Vonjy Andriamanga , fa ny tanjona dia ny fitsinjovana ny mpajifa. « Raha tsy misy mpanjifa dia tsy misy sehatrin’ny solika, Hojerena ihany koa ny mpandraharaha, izay mitady tombony eo amin’ity famatsiana ny solika ity , saingy tsy ekena ny tombony miompanana. Eo koa ny fitandremana amin’ny tetim-bolampanjaka , izay tokony hanome ny fanampiana eo amin’ity sehatrin’ny solika ity. », hoy hatrany ny minisitra.
Na eo aza ny fifandroritana eo amin’ny ankolafy misehatra amin’ny resaka angovo, tapaka nandritra ny fivoriana fa tsy hihetsika ny vidin’ny solika amin’ity volana April ity.
ANDRY RAJOELINA: HANATRIKA NY FIHANIANAN’NY FILOHAN’I SÉNÉGAL
MAROANTSETRA: MISY ROTAKA, TRANO ROA MAY HATRETO